Samachar Batika || News from Nepal » दु:खद खबर ! होलीका लागि श्रीमानले कपडा नकिनिदिएको रि’समा श्रीमतीले ६ महिनाकी छोरीलाई मा’रिदिइन्
नजिकिँदै गरेको होलीका लागि श्रीमानले कपडा नकिनिदिएको रि’समा श्रीमतीले ६ महिनाकी छोरीलाई मा’रिदिएकी छिन् । घ’टना अलीगढ जिल्लाको रामपुरको भएको आज तकको समाचारमा उल्लेख छ । यहाँ २५ वर्षकी महिलाका पतिले होलीका लागि कपडा किनिदिन अस्वीकार गरेपछि पती पत्नीमा झ’गडा भएको थियो । झ’गडापछि श्रीमतीको रि’सको पारो यति तात्यो कि उनले आफ्नी ६ महिनाकी छोरीलाई कु’टीकु’टी मा’रेकी छिन् ।
पुलिसका अनुसार आ’रोपी महिलाको नाम पिंकी शर्मा हो। पिंकीका पति राहुलले कपडा किन्न बजार जान नमानेपछि यी दुईबीच झ’गडा भएको थियो । झ’गडापछि पिंकी रि’सले चुर भएर छोरी सोनी भएको ठाउँमा गएर उनलाई नराम्ररी कु’टिन् । बालिकाको कु’टाइका कारण घ’टनास्थलमै ज्या’न गयो । घ’टनापछि राहुलले पुलिसमा पत्नीवि’रुद्ध उ’जुरी दिए । पुलिसले ह’त्या अ’भियोगमा मु’द्दा दर्ता गरी पिंकीलाई प’क्राउ गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ ।
६ महिनाअघि मात्रै विवाह गरेको केही समय नबित्दै नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा नवविवाहित युवती मृ’त भेटिएकी छिन् । विदुर नगरपालिका वडा नं. १ ढुंगे बजार २१ वर्षीय सञ्जु खातीले बुधवार राति त्रिशुलीमा हा’म फा’लेकी थिईन् ।
युवतीको मृ’त्यु भएपछि प्रहरीले सोही स्थानमा अचेत अवस्थामा फेला परेका उनका पतिलाई प’क्राउ गरेको छ । विदुर नगरपालिका ढुंगेबजारस्थित खोलासँगै जोडिएको एक चार तले घरको बरन्डाबाट त्रिशुलीमा हा’म फा’लेकी सञ्जुको नदीसँगको बगरमा ब’जारिएर मृ’त्यु भएको प्रहरीले अनुमान गरेको छ ।
बगरमा मृ’त अवस्थामा फेला परेकी उनलाई जिल्ला अस्पताल त्रिशुली पु¥याइएको थियो तर चिकित्सकहरुले उनलाई मृ’त घोषित गरेका थिए । उनका पति २२ वर्षका मौसम खाती पनि बे’होस अवस्थामा फेला परेका थिए । उनको अवस्था भने सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ । नुवाकोट जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ताका अनुसार बुधवार राति १० बजेतिर स्थानीयले घ’टनाबारे प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।
सञ्जु र मौसमबीचको सम्बन्ध भने त्यति राम्रो नरहेको स्थानीयले बताएका छन् । उनीहरुबीच वि’वाद भइरहने गरेको र बुधवारपनि दुई जनाबीच विवाद भएपछि घ’टना घ’टेको हुनसक्ने स्थानीयको भनाइ छ । मौसमले चुरोट खाएको निहुँमा आमासँग म’नमुटाव हुँदा सञ्जुले आ’त्मह’त्या गरेको घरका अन्य सदस्यले बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति २४ फाल्गुन २०७६, शनिबार १५:५१